Sary 3D ho an'ny vao manomboka: rindrambaiko modely tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Nerea Morcillo | | General, maro
Ny sary 3D dia niseho teo amin'ny fiainantsika miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia. Maro amin'izy ireo no voasariky ny tanana teo aloha, saingy mila sary marobe mba hivoatra sy hitombo.
Izany no antony amin'ity lahatsoratra telo dimension ity, manolotra anao ny fahafahana hianatra bebe kokoa momba ny sary 3D, noho izany dia nanomana fitaovana maromaro izahay izay hanampy anao hanomboka ny fiainanao vaovao amin'ity fomba fanaovana sary ity izay nisongadina tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Tsy te-hiala bebe kokoa izahay ary noho izany antony izany dia hanazava aminao mialoha hoe inona io fomba fanaovana sary io ary nahoana no zava-dehibe ny mianatra azy io.
1 sary na endrika 3D
2 Software 3D ho an'ny vao manomboka
2.2 Sketch Make
3 Mpanakanto sy mpamorona 3D
3.1 zaza lehibe
sary na endrika 3D
Loharano: mpanonta printy 3D
Ny teknolojia 3D dia karazana teknolojia izay tany Etazonia no niandohan'ny voalohany ary rehefa nandeha ny fotoana, dia nanana laza be tany amin'ny firenena samihafa. Nanomboka tamin'ny 1915 izany ary ny sary sy sary 3D voalohany dia novinavinaina.
Taorian'ny am-polony taona vitsivitsy teo anelanelan'ny hazavana sy ny aloka, tamin'ny 1980 dia nipoitra ny IMAX, orinasa miandraikitra ny famokarana sarimihetsika ao amin'ny efitrano natao manokana ho an'ny 3D. Ny fihetsiky ny talanjona tamin'ny fanatsarana lehibe an'ity teknolojia ity dia niseho eran'izao tontolo izao. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nanomboka namolavola fitaovana izay nanakaiky kokoa an'izao tontolo izao ny 3D.
Software 3D ho an'ny vao manomboka
Noforonina tamin'ny 1995, Blender dia rindrambaiko modely 3D feno, tena malaza eo amin'ny tontolon'ny animation sy ny horonan-tsary noho ireo endri-javatra maro atolony. Tsy maimaim-poana ihany izy io fa misy loharano misokatra ihany koa, izay midika fa hatsaraina hatrany. Mety ho toa saro-takarina ihany izany fa tena ilaina tokoa raha mila manomboka mamolavola amin'ny 3D ianao.
Ny iray amin'ireo tombony manintona indrindra amin'ny Blender dia ny manohana ny fantsona 3D manontolo, ao anatin'izany ny modeling, animation, simulation, rendering, motion tracking, sns. Ity rindrambaiko ity dia cross-platform ary Misy amin'ny solosaina Linux, Windows ary Mac izy io.
Izy io dia mifototra amin'ny modely polygonal, tsy voatery ho vahaolana be mpampiasa indrindra amin'ny sehatry ny famokarana additive, fa mamela ny fanondranana modely 3D amin'ny endrika mifanaraka amin'ny teknolojia.
Sketchup Mak, fantatra taloha amin'ny anarana hoe SketchUp, dia noforonin'ny LastSoftware tamin'ny taona 2000 mba hampiasaina amin'ny famolavolana maritrano, an'ny Trimble Navigation LLC izy izao.
Maimaim-poana ny programa Sketchup ary manolotra fitaovana tsotra ho an'ny mpampiasa marobe: mpanamboatra, mpanao mari-trano, mpamorona, injeniera ary mpanamboatra. Ity programa ity dia ahafahanao manao sary mora foana ny hevitrao amin'ny maodely 3D.
Alohan'ny hanombohanao ny famoronana dia azonao atao ny misafidy môdely iray izay hitarika anao amin'ny fizotran'ny modeling manontolo. Izy io dia rindrambaiko 3D tena azo ampiasaina, izay mitazona fifandanjana tsara eo amin'ny fampiasana sy fampiasa, safidy tsara ho an'ireo vao manomboka izay matotra amin'ny fianarana CAD.
sculptris mampiasa sary sokitra nomerika ho fototra hamoronana modely 3D. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia ho afaka mamorona ny maodely 3D ianao amin'ny alàlan'ny famolavolana harato amin'ny kapoka borosy samihafa.
Ny famoronana ny modelyo dia ho mitovy amin'ny famolavolana zavatra amin'ny fampiasana tanimanga. Ity rindrambaiko ity dia manomboka amin'ny sehatra iray, avy eo ny mpampiasa dia afaka manao modely araka izay irina amin'ny alàlan'ny fanenjanana, fandavahana, fanamafisam-peo, sns. Izany no mahatonga azy io ho fitaovana tsara indrindra rehefa mamorona endri-tsoratra na lalao video.
Ary koa, raha tsy fantatrao, Sculptris an'i Pixologic, mpamorona ny Zbrush. Izy io dia rindrambaiko 3D tsara ho an'ny vao manomboka, tsy eo an-dalam-pandrosoana intsony, mbola azonao atao ny misintona azy, saingy mety tsy mifanaraka amin'ny rafitra fiasa vaovao.
Vectary dia fitaovana fanaovana modely 3D an-tserasera izay ahafahanao mamorona, mizara ary manamboatra endrika 3D. ity logiciel ity dia fitambaran'ny modely harato mahazatra, famolavolan'ny fizarana, ary plugins parametrika.
Namboarina hatrany am-boalohany izy io mba hanamora ny fanaovana modely 3D ho an'ireo vao manomboka, fa mety ho an'ny matihanina ihany koa. Fanampin'izany, voatahiry ao anaty rahona ireo maodely, izay azo idirana amin'ny alàlan'ny navigateur rehetra, ny mpampiasa dia afaka miditra mora foana ny zavaboariny ary mizara ny maodely avy amin'ny toerana rehetra manerana izao tontolo izao.
Clara.io, dia rindrambaiko famandrihana sy modely, navoakan'ny Exocortex, mba hahatakaranao azy bebe kokoa, dia lozisialy 3D modeling, animation ary rendering Miorina amin'ny rahona misy endri-javatra feno izay mandeha amin'ny mpitety tranonkalanao.
Ity vahaolana ity dia ahafahanao mamorona modely 3D be pitsiny, mamorona famandrihana photorealistic mahavariana ary mizara azy ireo nefa tsy mametraka rindrambaiko manokana. Ny fianarana dia tsy sarotra loatra, izay mahatonga azy ho mety amin'ireo mpampiasa izay tsy dia manana traikefa loatra amin'ity sehatra famolavolana ity.
Amin'ity rindrambaiko ity, ny geometrie 3D dia misy singa samihafa, antsoina hoe singa. Ny singa telo samy hafa dia endrika, sisiny ary vertices.
3DSlash dia noforonin'i Silvain Huet tamin'ny 2013, izay nahazo aingam-panahy tamin'ny zanany lahy nilalao ny lalao video Minecraft, lalao iray izay tsy maintsy iainanao ao anatin'ny tontolo noforonina miaraka amin'ny cubes kely. Ny 3Dslash, toa an'i Minecraft, dia mampiasa ny tanjaky ny sakana kely azonao esorina na ampiarahina mba hanampiana amin'ny famoronana ny maodely 3D-nao.
Ny lozisialy dia manolotra fitaovana isan-karazany hanampy amin'ny famolavolana ny drafitrao, ao anatin'izany ny fahafahana manova ny ampahany amin'ny zava-misy ho 3D amin'ny sary iray izay ampidirinao sy arahinao fotsiny.
Ankoatr'izay dia manana famaha hatramin'ny 0.1 mm izy io, izany hoe ity programa ity dia hanampy anao hanao ny tanjonao amin'ny fomba marina tsara, ahafahanao mitondra ny zava-misy amin'ny famoronana.
Ity rindrambaiko 3D ity dia noforonina manokana ho an'ny tanjona fanabeazana, ny fampandrosoana azy dia natao mba ahafahan'ny rehetra mampiasa OpenSCAD, rindrambaiko CAD matihanina kokoa.
Ny baiko amin'ny fampivoarana zavatra sy ny fiovan'izy ireo dia aseho amin'ny bloc miloko, mampahatsiahy ny kilalao fanorenana malaza, LEGO. Ny kaody BlocksCAD dia mifanaraka tanteraka amin'ny OpenSCAD mba hahafahanao mametraka ny fikasihana farany amin'ny modelyo.
Ny endrika fanondranana dia mety ho OpenSCAD na STL. Mba hahazoana antoka fa misy olona afaka mianatra mampiasa ny rindrambaiko, BlocksCAD dia manana fantsona Youtube misy fampianarana samihafa momba ny modeling 3D.
Mpanakanto sy mpamorona 3D
Eto izahay dia mamela andiana mpanakanto mba hamita ny aingam-panahy ho anao:
Grand Chamaco dia heverina ho iray amin'ireo mpanakanto 3D revolisionera indrindra. Teraka tao Mexico City, miafina ao ambadiky ny saron-tava manafina ny maha izy azy izy fa tsy ny talentany.
Ny mampiavaka ity mpanakanto ity dia tsy isalasalana fa ny fahaizany mamorona endri-tsoratra izay novolavolaina sy noforonina tamin'ny alalan'ny fitaovana 3D. Ny mampiavaka ny sanganasany koa dia ny loko isan-karazany ampiasainy, satria mpanakanto tia milalao loko sy loko izy.
Loharano: Funniest Cinema
Yanick, dia heverina ho iray amin'ireo mpanakanto nomerika tsara indrindra amin'ny indostrian'ny sarimihetsika. Manampahaizana manokana izy ary miasa amin'ny fomba ara-javakanto concept art.
Izy koa dia manam-pahaizana manokana amin'ny sary hosodoko matte sy 3D. Fanampin'izay, nianatra sy nahazo fiofanana momba ny akademika lehibe nifototra tamin'ny fanoharana ara-teknika sy ny vokatra nomerika izy, izay tena nanokanana ny tenany taty aoriana, taona maro taty aoriana.
Malaza amin'ny fitarihana ny famokarana toy ny Transformers, Star Trek, Indiana Jones: Fanjakan'ny karandoha kristaly), Ady ny Worlds, Star Wars: Episode III, Pirates of the Caribbean, Terminator III, Ireo tranobe roa, Titan AE ankoatry ny maro hafa.
Izy dia mpanao sary sy mpamorona manokana amin'ny famoronana endri-tsoratra. Cecy dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana 3D, amin'ny famoronana tantara hiarahana amin'ny sanganasany, ary tena tia mozika.
Manatanteraka ny nofinofiny hamokatra izy amin’izao fotoana izao kilalao zavakanto miaraka amin'ny teti-dratsiny: niara-niasa tamin'ny Magalaxy Toys izy, namoaka ny endrika sofubi voalohany izay hanomboka fanangonana miaraka amin'ny endri-tsoratra maro hafa.
Izy dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo mpamorona 3D miavaka indrindra amin'izao fotoana izao.
Heverina ho mpanao mari-trano amin'ny asany izy ary tia VFXindrindra ny fomba jiro.
Niasa tamin'ny dokam-barotra izy ary niara-niasa tamin'ny marika toa an'i Autodesk sy Nvidia, ary koa tamin'ny famokarana toy ny The Walking dead, Matahora ny maty, Teraka indray ireo mahery fo na ao amin'ny atiny voalohany Netflix tany Meksika, Ravens Club.
Ny asany dia naka hazavana foana ho singa volumetric izay mitondra ny zava-misy amin'ny sehatra 3D.
Ny famolavolana 3D amin'izao fotoana izao dia mihetsiketsika amin'ny lafiny maro, maro no natokana ho an'ny famandrihana sy fandrafetana zavatra, fa ny hafa kosa mampiasa fanoharana ary mamadika izany ho zavakanto tena misy izay mihoatra ny sary.
Azo antoka fa tsy afaka mamadika anao ho sary 3D matihanina izahay. Saingy azonay antoka fa tamin'ity lahatsoratra ity dia nampanakaiky anao ny tanjonao manaraka.
Navelanay ho anao ity andiana mpanakanto kely ity mba hahitanao sy hahitanao indray ny fomba fanaonao, ho fitaomam-panahy avy amin'ireo izay ao amin'ny elite amin'ny famolavolana ary fantaro izay lalana tokony hofidinao. Tonga izao ny fotoana hanaovanao fikarohana feno sy hianatra bebe kokoa momba ny famolavolana 3D ary hamela ny famoronana handray anjara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Sary 3D ho an'ny vao manomboka
ny fomba hanaovana gazety